परिवारसँग घुम्ने योजना अधुरै « Postpati – News For All
कोरोना भाइरस दाङ प्रधानमन्त्री ओली पक्राउ नेकपा रोल्पा प्रचण्ड राशिफल नेपाली कांग्रेस ओली प्रचण्ड
फेसबुकको माध्यमबाट शिक्षक शान्ति रानामगरले सहयोग उठाएर गरे मृगौला पीडितलाई रू.१,५६,१७१ सहयोग
निरेमको नयाँ म्यूजिक भिडियो ‘ओठको मुस्कान’ युट्युबमा
माछा, भ्यागुत्ता र गोठालाहरु
शिक्षक महेश कुमार केसी अल्बिदा भए ! गाउँ र बिद्यालय शोकमा डुब्यो [तस्बिरहरु]
प्रचण्ड-माघव समूहद्वारा रोल्पाको सुलिचौरमा विरोध सभा
पत्रपत्रिकाबाट पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
मङ्सिर १५, काठमाडौँ । बिहीबार राति ११ बजेसम्म प्रेमबहादुर खत्री बुबा र श्रीमतीसँग भिडियो कलमा कुराकानी गर्दै थिए ।
चार वर्षदेखि अमेरिकामा रहेका भाइ लोकराज पनि कुराकानीमा जोडिएका थिए । अन्त्यमा ‘अब मेरो ड्युटी सुरु हुन्छ, हजुरहरू सुत्नुहोस्, घर आउन धेरै दिन बाँकी छैन, घर आएर घुमौंला, रमाऔंला’ भन्दै उनी छुट्टिएका थिए । केही दिनपछि बिदामा घर आउने र परिवारसँगै घुम्ने, रमाउने योजना शुक्रबार बिहान उनीसँगै अस्तायो ।
भारतको जम्मु–कश्मीरमा ड्युटीमा रहेका बेला शुक्रबार बिहान ५ बजेतिर कारमा आएका पाकिस्तानी सेनाले गोली हानी प्रेमको हत्या गरे । सुरुमा प्रेमलाई गोली लागेको भनेर श्रीमती भगवतीलाई फोन आयो । पछि बुबा लालबहादुरले फोन गर्दा मृत्यु भइसकेको जानकारी पाए । त्यसपछि हतारहतार भारत गएका लालबहादुर शनिबार राति छोराको शव लिई तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ बेलुवास्थित घर फर्किएका हुन् ।
छोरा प्रेमको शव जम्मु–कश्मीरबाट विमानमा लखनऊ ल्याएपछि त्यहाँबाट गाडीमा रातारात घर ल्याइएको लालबहादुरले बताए । भारतीय सेनामा १३ वर्ष बिताएका ३० वर्षीय प्रेमको केही वर्षपछि जागिरबाट अवकाश लिएर परिवारसँगै बस्ने योजना थियो । उनको घरमा मोटरसाइकल मात्रै छिर्ने गेट थियो, नेपाल फर्केपछि उनले गाडी किन्ने योजना सुनाएकाले धमाधम ठूलो गेट निर्माण भइरहेको छ । तर यी कुनै पनि सपना पूरा नहुँदै उनको मृत्यु भयो ।
‘भाग्यमा यति नै लेखेर आएको रहेछ । जागिर सकिन धेरै वर्ष बाँकी थिएन,’ भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त सुवेदार बुबा लालबहादुरले भने, ‘भाग्यले साथ नदिएपछि कसको के लाग्यो र ? अब जागिर सकिएपछि घरमा आएर काम गर्ने उसका धेरै योजनाहरू थिए, सबै सकिए ।’
जीवनको महत्त्वपूर्ण समय बाँकी रहँदै भएको उनको निधनले सबैलाई दुःखी बनाएको छिमेकी तुलसी केसीले बताए । ‘बुबाआमा, श्रीमती, छोराछोरी मात्र होइन, आफन्त र छिमेकीहरूलाई पनि सम्हाल्न कठिन भएको छ,’ उनले भने, ‘आमा र श्रीमती छिनछिनमा बेहोस भइरहेका छन् । डाक्टर ल्याएर उपचार गरिरहनुपरेको छ ।’
प्रेमको आइतबार शीतलपुर घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनका ७ वर्षीया छोरी र ५ वर्षीय छोरा छन् ।
१५ मंसिर २०७७, सोमबार को दिन प्रकाशित
ओली समूहको कार्यक्रम बिथोल्न खोजेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहका कार्यकर्ता पक्राउ
प्रचण्ड र मलाई जेल हाल्ने योजनामा छन् ओली: माधव नेपाल
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध वडाबाटै प्रदर्शनमा जुट्न देउवाको निर्देशन
डब्ल्यूएचओले भन्यो- कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार ६० मुलुकमा फैलिसक्यो
प्रधानमन्त्री ओलीको हालत ट्रम्प जस्तै हुन्छ: उपेन्द्र यादव
निरेमको नयाँ म्यूजिक भिडियो 'ओठको मुस्कान' युट्युबमा
मौलिक लोक नृत्य प्रतियोगितामा तेस्रो हुन सफल चितवन मगर समुदायलाई पुरस्कार बितरण एक कार्यक्रम बीच सम्पन्न
टोप बहादुर डाँगीलाई विप्लव नेकपा गंगादेवले गर्यो निष्कासन
तुलसीपुरका राजेन्द्र केसी पक्राउ
रोल्पामा हरिण भनेर हानिएको गो,लीले महिलालाई लागेपछि…
नेपाल बन्द सफल बनाउन नेकपा रोल्पाको आह्वान